I-Twin Cedars Retreat: Ikhaya elimnandi laseNew England
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguAndrew
Esi simbo saseNew England sinegumbi lokulala eli-3 lokuhlambela ikhaya eli-1 libekwe ngokulula nje ngaphandle kwe-US Route 1 e-Bridgewater, ME. Uyakonwabela ukufikelela ngokulula kwiindlela ze-ATV malunga neeyadi ezili-100 ukusuka endlwini. Esi sisiqalo esihle ukonwabela yonke loo nto intle yaseAroostook County kufuneka ibonelele ngeeholide ezine zonyaka. Usapho lwakho luya kukonwabela ukuba bucala kwesi silungiselelo sizolileyo ukuze niphumle kunye. Bhukisha kwakamsinyane ukuze uqinisekise ukuba uyafumaneka ngokuhlala kwakho. Sijonge phambili ekwenzeni ukuhlala kwakho kube kumnandi kangangoko kunokwenzeka!
Ifenitshala kunye neendawo zokuhlala zikhululekile kwaye ikhitshi igcwele kakuhle ukuvumela inkululeko yokonwabela i-snack yasebusuku okanye wenze isidlo sakusasa esimnandi esishushu. Amagumbi okulala amathathu onke ahonjiswe kakuhle kwaye aneebhedi ezitofotofo. Igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi lisandula ukulungiswa kwakhona njengoko kunokubonwa kwiifoto.
Ikhaya likwidolophu encinci yaseNew England abantu babenobuhlobo kwaye ukuhamba kwasekuseni kuyahlaziya! Ngokuxhomekeke kwixesha lonyaka kukho indawo yokutyela encinci ebizwa ngokuba yi (Intsebenziswano) engekude nendlu apho ukutya okumnandi kunye ne-ayisikrimu yedessert inokufumaneka khona.
Singathanda ukuba iindwendwe zethu zizive zisekhaya endlwini yethu kwaye zizive zikhululekile ukusicebisa ngazo naziphi na iimfuno onokuba nazo. Sikwathanda ukukwazi njengeendwendwe zethu kancinci ukuba kunokwenzeka ngexesha lokuhlala kwakho nathi kwaye siqinisekise ukuba unamava angcono kakhulu.
Singathanda ukuba iindwendwe zethu zizive zisekhaya endlwini yethu kwaye zizive zikhululekile ukusicebisa ngazo naziphi na iimfuno onokuba nazo. Sikwathanda ukukwazi njengeendwendw…